Ụbọchị My Pet » 5 Ego Winter Ụbọchị echiche
5 Ego Winter Ụbọchị echiche
emelitere ikpeazụ: Oct. 14 2020 | 2 min agụ
* Nke oge maka ezumike bụ'abụ, oyi fun na iwepụta oge na-na ndị ha hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na ị na-amụrụ dị ka m, onye na-adọga inweta ịzụ akwụkwọ mposi, mgbe ahụ ị na-achọ ihe oyi ụbọchị na-ma na-atọ ụtọ na-agaghị agbaji gị obere akpa. Ị na na na chi. Ise a ụbọchị echiche ndị ego na ha ga-ahụkwa gị mmekọrịta a ezumike.
1. Mee a gingerbread ụlọ ọnụ
Indulge gị ụtọ nha nha, ka sparks ofufe na-ewu ụlọ nke a gingerbread ụlọ. Nchegbu banyere gị enweghị injinịa talent? Fret ọzọ, e nwere ndị a ukwuu gingerbread ngwa iwu nke na-agụnye ihe nile dị gị mkpa, na ihe dị mfe na-agụ ntụziaka mpempe akwụkwọ (ọtụtụ n'ime ha ọbụna na-agụnye foto). Efu na-erughị $20, na ngwa iwu dị na kasị supermarkets, nka echekwa, na ọbụna online. Tinye na ụfọdụ ezumike so n'ìgwè na-esi na-ewu! Nke abụọ fabulous akụkụ nke gbakọta a oriri e kere eke na smashing ya ma na-eripịarịta ya ọnụ. Maa a nkwa nke oké oriri na oké oge.
2. Chọkoletị dị ọkụ, cuddles na a ezumike nkiri
Ọ dịghị ihe gbagwojuru oyi dị ka a na-ekpo ọkụ ọṅụṅụ na-acha ọkụ ọkụ ahuhu nke ịhụnanya. Na naa ikekwe kwa ufiop. Ihe m na-ekwu bụ na cuddling gị pụrụ iche mmadụ na-anụ ụtọ a cup nke na-ekpo ọkụ chocolate nwere ike ọkụ gị insides si chilly oyi ihu igwe. Tinye na a kpochapụwo ezumike film dị ka Iri na otu, Ọ bụ a Ebube Life, Home Naanị, Olee otú ndị Grinch zuru Christmas ma ọ bụ A Christmas Akụkọ nke ma ọ bụ nke kacha ụbọchị n'abalị. Efu nnọọ nta, ị nwere ike ịzọpụta ego mgbe ịghọ ano na àgwà oge na nso na onye ị hụrụ n'anya.
3. Gaa maka a abalị ije ahụ niile mara mma ọkụ
Festive decorations bụ a akụkụ nke ihe na-eme ka oyi mara mma. N'agbanyeghị ebe ị na-ebi, e nwere yiri ka n'ụlọ ahụ mgbe ụlọ, n'okporo ámá mgbe n'okporo ámá lined na ọkụ, ịchọ mma, garlands na ihe nile ọṅụ. Chere ruo mgbe mgbede, mgbe ahụ na-aga n'ihi a ije ogbe ndịda ma ọ bụ na obi gị na-enwe na-achọ na ọmarịcha ezumike ọkụ na decorations (ịhụ otú ọtụtụ ndị nnukwu inflatable ndokwa i nwere ike ịhụ). Ị pụrụ ọbụna mee ka ọ ghọọ a egwuregwu site ịme ntuli aka nke ụlọ nwere mma ezumike ntọlite. Efu ihe ọ bụla, Nke a dị mfe ụbọchị nwere ike mfe na-amụnye ọkụ mmekọrịta gị.
4. Snow ahụmahụ
Were uru nke blanket nke snow na ukwu na onye ị hụrụ n'anya n'ihi na ụfọdụ ahụmahụ na oké n'èzí. Gaa cross mba ski, hiking ma ọ bụ snow shoeing gị n'ogige ntụrụndụ obodo ma ọ bụ ụzọ ụkwụ. Enwe na-efe efe ala ugwu na reliving gị na nwata na a ụbọchị tobogganing. Mee a snowman ọnụ ma ọ bụ a nkera ma ọ bụ na-aga Skating na ihe n'èzí ice rink. Efu nnọọ nta, ọdịdị ga-adị otu nke kasị mma playgrounds maka mmekọrịta baa ọgaranya.
5. N'onwe Gị crafts
The Internet esetịpụ ọtụtụ free N'onwe Gị ezumike nka echiche na ntụziaka. Họrọ a di na nwunye na-akpali ndị na-onyeisi ka a nka ahịa ma ọ bụ na-eji ihe i dina na gburugburu ụlọ ma na-aghụghọ! Ọ bụrụ na ị bụ mgbe a na-akwado nke nkà na crafts azụ n'ihu ọha akwụkwọ, dị nnọọ na-echeta na ọ bụ mgbe ezi na-agbalị ihe ọhụrụ, na kwụpụ gị nkasi obi mpaghara. E wezụga gị ga-onye gị na mpụ nyere gị aka pụta.
Ise a ụbọchị echiche ndị ọnụ, zie ezie na ga-ekwe nkwa a ezigbo oge ka gị na onye ị hụrụ n'anya n'oge a oyi oge. Na-enweta ezumike na-enwe mmekọrịta gị.
5 Ihe Ị Pụrụ Ịmụta Banyere dịwara site na 50 Shades nke Right Now
Olee otú ụbọchị na Facebook
5 Creative Ụzọ-asị na m Hụrụ Gị n'Anya